बेलायत: प्रकृति, जलवायु। वनस्पति र ग्रेट ब्रिटेन को Fauna
यस लेखमा हामी बेलायत बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। एक टाढा-टाढाका देश अक्सर कुहिरो र बारम्बार वर्षा हामीलाई सम्बद्ध। तर यो रोचक छ, ग्रेट ब्रिटेन को प्रकृति र जलवायु को सुविधाहरू के हुन्?
देश लगभग सबै आफ्नो क्षेत्रहरु न्यानो समुद्र र असर गर्छ, एक अपेक्षाकृत सानो आकार छ पश्चिमी हावा, र यसैले त्यहाँ तापमान कुनै विपरीत छ। बेलायत जलवायु समशीतोष्ण छ।
निस्सन्देह, तापमान अवस्था समुद्र माथिको उचाइ असर - हिमाल मा र पहाडलाई मा घाटिहरुमा भन्दा धेरै कूलर छ। त्यसैले, वेल्स को पहाडी देहात रूपमा गर्मी मा स्कटल्याण्ड को हिउँदमा धेरै चिसो र कम तातो गरेको अधिकांश मा साथै भन्दा इङ्गल्याण्ड बाँकी मा मा।
गर्मी तापमान विरलै पुग्छ मा + 32 ° सी र जाडो तल पर्दैन -10 ° सी र त कुनै कम, त्यहाँ उत्तर र दक्षिण बीचको धेरै फरक छ। यसरी, शेटल्याण्ड औसत तापमान गर्मी मा गर्न हिउँदमा + 11 ° C + बाट3° C दायरा।
बेलायत प्रकृति साधारण धेरै छ पश्चिमी को देशहरूमा युरोप। र यो पछि, एकदम तार्किक छ ब्रिटिश द्वीपहरु हालै विभाजित थिए। क्षेत्र को जलवायु निकै उत्तर एटलान्टिक वर्तमान को निकटता प्रभावित छ वर्णन गरे। त्यो किन यहाँ र मध्यम तापक्रम, उच्च आर्द्रता र सतह पानी को एक ठूलो संख्या प्रभुत्व छ।
यो जलवायु, पाठ्यक्रम, सागर र खाडी स्ट्रिम असर गर्छ। को अंग्रेजी लागि, सामान्य मौसम वर्षा र चिस्यान दैनिक छ। सबैभन्दा गम्भीर मौसम अवस्था स्कटल्याण्ड, वेल्स मा पहाडी परिदृश्य को उत्तर मा।
मौसम मा सागर को प्रभाव मा बाक्लो कुहिरो र बलियो gusty बतास संग अस्थिर मौसम को predominance देखाउँछ। जाडो महिनामा यहाँ, बाटो, अत्यन्तै नरम, तर नम एकै समयमा द्वारा।
समुद्री दक्षिण पश्चिम हावा चिसो मौसम मा तापमान उठ्छ, तर एकै समयमा आँधीबेहरी र हावा संग वर्षाको र बादल मौसम ल्याउँछ। को उत्तर-पूर्वी देखि चिसो हावा आक्रमण गर्दा, यो एकदम ठण्डा हुन्छ। यो सबै यो बेलायत को प्रकृति को विशेष सजिलै देखिने सुविधाहरू बनाउँछ।
हिउँ सम्पूर्ण देश समेट्छ। हिउँदमा, तिनीहरूले स्कटल्याण्ड मा विशेष प्रशस्त छन्। र इङ्गल्याण्ड को दक्षिण मा उनि सामान्यतया शायद छन् - पनि यहाँ घाँस हरियो छ सबै वर्ष दौर।
छुटकारा द्वारा बेलायत क्षेत्रमा दुई क्षेत्रहरु मा विभाजित छ:
उच्च ब्रिटेन, देश को पश्चिम र उत्तर मा स्थित छ र कडा पहाड र lowlands द्वारा विभाजित छ जो (उत्तरी आयरल्याण्ड संग)।
कम ब्रिटेन, साना डाँडाहरू संग पहाडी भू-भाग द्वारा विशेषता छ जो पूर्व र दक्षिण, मा स्थित।
यो चपटे छ केही ठाउँमा - प्रकृति को सुविधाहरू मा बेलायत र दुई क्षेत्रहरु बीच पारंपरिक सीमा सधैं देखिने छ भन्ने तथ्यलाई असर गर्छ। भनिन्छ सीमाना दक्षिण-पश्चिम मा न्यूक्यासल फैलिएको।
देश भर यात्रा, स्पष्ट चाँडै प्रत्येक अन्य परिदृश्य पालना कसरी नोटिस। सामान्य मा, जहाँ प्रकृति धेरै विविध छ संयुक्त राज्य, एक धनी वनस्पति दावा।
यसको सुविधाहरू कारण जमिनको अवस्था र भू-भाग गर्न। उदाहरणका लागि, उच्च ब्रिटेन - यो धेरै, कुहिरो आँधी र वर्षाको क्षेत्र, जो, पाठ्यक्रम, को वनस्पति किनारा असर छ। एक वेल्स - एक पहाडी क्षेत्र, घास र Moors, जहाँ भेडा खुरचना संग सजाया।
प्रागैतिहासिक पटक मा, वन्यजन्तु बेलायत वृक्ष, सन्टी, ओक, बीच एक धेरै बाक्लो जंगल थियो। स्थानीय पवित्र, धेरै बिरुवाहरु, र विशेष गरी revered ओक छलफल। यो आफ्नो पुरातन विश्वास कारण थियो। तर, यो एक सताब्दी थियो र धेरै परिवर्तन भएको छ।
को बीसौँ शताब्दीका ब्रिटिश वनको अन्त द्वारा हदसम्म कारण मानव गतिविधिहरु गर्न नाश भए। मान्छे, को शक्तिशाली रूखहरू काट्न वनस्पति र जीव को प्रजाति संरचना मा प्रमुख परिवर्तन गर्न नेतृत्व जो marshes, सुकेको। देश मा जो त्यहाँ पहिले (FIR, सजाना, मेपल) भएको छैन विदेशी रूखहरू, आयात र लगाए थिए।
वर्तमान मा, देश मा वन सम्पूर्ण क्षेत्र मात्र 10% कब्जा। तिनीहरूलाई को भन्दा पर्वतमा ढलान र नदी घाटिहरुमा र क्षेत्र को दक्षिण मा बचे। हाल, विशिष्ट बोट बेलायत - बीच, खरानी, hornbeam, एल्म र ओक। तर Grampian पहाड मा ओक रूखहरू संग बढ्न स्प्रूस-पाइन वन।
देश ठूलो वन अब अवस्थित छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो अझै पनि यो हरियो किनारा छ कि एक छाप छ। संयुक्त राज्य, गम्भीर मानव हात द्वारा क्षतिग्रस्त भएको थियो प्रकृति जो, artificially क्षेत्रहरू, चिसो हावा बाट सुरक्षा बाड, रिजर्व गठन बीच windbreaks रोपण गरिएको छ।
यस वन बाहेक, देश जो बिना यस प्रकृति को पूर्ण विवरण हुनेछ, Heather मा धनी छ। ब्रिटेन पनि जंगली मान्छे को undeveloped जायदाद मा रहेको धनी घाँसदार wasteland छ।
Sedge thickets घेरिएको sphagnum bogs, जो नम स्थानहरू कब्जा। यो पनि Willow thickets छ।
हामी पनि सुन्दर जडीबुटी देश को केन्द्रीय भाग उल्लेख गर्नुपर्छ। प्राकृतिक Meadows र क्षेत्रहरू यहाँ बढ्न जंगली सेतो र पहेंलो daffodils, primroses, लिली, yartyshnik आदि मा
अचम्मको देश बेलायत। प्रकृति र यसको Fauna यो सबै गरेर बतान गर्न गाह्रो छ भनेर धनी र वैविध्यपूर्ण छ। हामी मात्र यसको Fauna को मुख्य प्रतिनिधि बारेमा बताउनुहोस्।
उदाहरणका लागि, दक्षिणी ब्रिटेन साधारण मृग, hares, Foxes, खरायो, raccoons, otters, stoats, weasels र Foxes मा। एक कृंसम्म प्रोटीन, चूहों, चूहहरुमा फेला परेन। सरीसृप सांप को मात्र तीन प्रजाति प्रतिनिधित्व गर्दै छन्, र आफ्नो ब्रान्ड छैन उत्तरी आयरल्याण्ड।
पनि घर अब मृग, fallow मृग, Martens, खरायो roe गर्न देश को जंगल मा। र नदी र पोखरी सामन र ट्राउट को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कड, माछा र haddock को पूरा तट वरिपरि तटीय पानी।
ब्रिटेन को चरा
ब्रिटेन धेरै चरा घर छ, यहाँ दुई भन्दा बढी सय प्रजातिहरू छन्। तिनीहरूलाई लगभग आधा अन्य किनारा देखि आइपुगेपछि, देश मा रहिरहेका छन्। मानव गतिविधि चरा मा एक प्रभाव थियो। केही प्रजाति संख्या यति, कि विलुप्त को कगार र अन्य को जनसंख्या छ कम छ, त्यसको विपरीत, वृद्धि।
wetlands को ठूलो जल पछि जलपक्षी को संख्या कम गर्न। एक देशमा विकास केही बोट प्रजाति विनाश, गर्न नेतृत्व गरेको छ जो चरा मा बारी प्रभाव। तर परेवा र sparrows उल्लेखनीय तल ठूलो शहर मा, वृद्धि वर्ष वर्ष यसको जनसंख्या द्वारा बसे।
देश मा लोपुन्मुख जाती को संख्या पुनर्स्थापना गर्न पर्यावरण शासन साथ क्षेत्रमा सुरक्षित छन्। तिनीहरूले धेरै बेलायत छन्। म ब्रिटिश तिनीहरूले जंगली चरा nepuganyh देशमा भनिन्छ जो पार्क मर्मतसम्भार, पैसा छोडूँगा थिएन, भन्न पर्छ।
आफ्नो feathered बासिन्दा को धेरै मान्छे को डर छैन भन्ने तथ्यलाई। सामान्य मा देश मा एक हंस लोकप्रिय प्रेम हो। आफ्नो धेरै सुन्दर लिजेन्ड सम्बन्धित प्राचीन समयमा यहाँ उपस्थिति। र अब, यी सुन्दर चरा एक विशेष स्थिति आनन्द। आफ्नो नम्बर को रेकर्ड राख्न हरेक वर्ष आफ्नो लेबल, आफ्नो हिंद खुट्टा।
संयुक्त राज्य - लामो इतिहास संग एक आकर्षक देश। लामो समय को लागि त्यहाँका बासिन्दाहरूले तिनीहरूलाई mythical गुण र क्षमता दिएर, धेरै बिरुवाहरु गर्न कदर र आदर। कुनै कम योगदान र जनावर, धेरै शताब्दीयौंदेखि प्रतीक सम्पूर्ण शाही राजवंशहरु लागि भएका छन् जो। तसर्थ, उल्लेख गर्न इङ्गल्याण्ड को प्रकृति, र विशेष अवसर बारे बोल्ने।
पहिलो पटक मूर्तिको पशुहरू Korol रिचर्ड को Lionheart प्रविष्ट गर्नुभयो। यो साहस प्रतीकको रूपमा हतियार आफ्नो कोट थियो, त्यहाँ तीन Zolotyh LVA छन्।
पछि, सिंहले धेरै महान परिवार को एक heraldic प्रतीक भयो। तिनीहरूलाई बाहेक, त्यहाँ पनि पूर्ण छन् र यस्तो ड्रेगन, griffins, unicorns रूपमा mythical प्राणीहरू। खैर, अझै टावर Ravens मा एक impregnable गढ को एक प्रतीक, को टाढा इतिहासको गाडेको एक परम्परा मानिन्छ जो पाँच, बसोबास।
सोची मा आराम। सोची जलवायु (महिना द्वारा मौसम)
स्पेन प्रकृति: तस्बिर, वर्णन, सुविधाहरू
विभिन्न खाद्य मशरूम र विषालु कसरी भेद गर्न shampinona-?
Lamprey नदी - पुरातन समयका देखि संरक्षित गरिएको predator-परजीवी एक प्रकारको
पंख घाँस - घाँस घांसको मैदान
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा खेल बारहरू: ठेगाना, मेनू, समीक्षा
Analogs "Nurofen" छोराछोरीलाई लागि
हाम्रो समय मा कोइला को गठन र यसको उत्पादन
तपाईंको फोनमा क्यास कसरी खाली गर्न? यस तर्कको
पैसा को लागि कोड "GTA: उपाध्यक्ष शहर" र अन्य खेल Cheats
कुनै पनि अवसरको लागि सजावट: सुरुचिपूर्ण stoles